Nkedo ọrụ - OUZHAN ahia (SHANGHAI) CO., LTD
Omenala Die-mgbatị Service-OEM China Die-mgbatị Parts Manufacturer
Ouzhan bụ onye ndu ụwa na nkenke nkenke, abụrụla ọkachamara pụrụ iche na-enye ọrụ nkenke ọkachamara maka ọtụtụ iri afọ. Ọ bụ ezie na Ouzhan'sroots dina anyị proprietary multi-slide anwụ mgbatị usoro anyị dokwara dị ka ike na rụpụta nke ibu akụkụ site ot-ekpo ọkụ na oyi na-atụ ụlọ anwụ mgbatị ụzọ.
Die mgbatị bụ a ngwa ngwa, na-eri-irè n'ichepụta usoro usoro maka mmepụta nke elu olu, net ekara, uko ndidi metal mmiri. Emekarị, anwụ mgbatị akụkụ nwere ike kpọkọta na etinyere enweghị n'ihu mbịne, na threaded akụkụ nwekwara ike-ajụ ozugbo. The ebu nwere ogologo ndụ, na ndị na-anwụ mgbatị ebu nwere ike na-emepụta ihe ọ bụla ọtụtụ nke mmiri, site na otu narị otu narị puku na nde.
Site na obere akụkụ dịka igwefoto izugbe, akụkụ typewriter, ngwaọrụ kọmputa na ihe ịchọ mma, yana akụkụ dị mgbagwoju anya nke ụgbọ ala dịka ụgbọ ala, locomotives, na ụgbọ elu, imirikiti n'ime ha na-arụ site na nkedo anwụ.
Ouzhan nkenke Die Nkedo ikike na atụmatụ:
- Imeputa ihe na-eri ego
- Nlekọta anya nke ọma na-ewepụ arụmọrụ
- Ike nke n'ichepụta ihe mgbagwoju anya
- Anụ ụlọ dị elu na mmepụta ihe
- Ukwe tolerances na ịnwụ anwụ
- The ogologo ndụ nke Ebu
Ihe mere ị ga - eji họrọ Ouzhan Die Casting Services
1. Mgbe anyị natara ajụjụ n'aka onye ahịa, anyị ga-eme nyocha nke mbido iji hụ ma anyị nwere ike ịmepụta. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ma akwadochaa ọrụ ahụ, anyị ga-eziga nkwupụta ahụ.
2. Ọrụ anyị na-asọ maka ọrụ ọhụrụ
• Ahịa ebe Ebu na samples iji.
• Anyị na-enye PI na 50% nke ebu ụgwọ iji kwụọ ụgwọ nkwụnye ego ahụ.
• Zipu onye ahịa ịkpụzi ihe osise maka nnabata.
• Malite mmepụta mmepụta mgbe nnata nke 50% nkwụnye ego.
• Zipu ihe atụ na akwụkwọ ndị ọzọ dị ka asambodo ihe onwunwe na akụkọ nyocha maka nnabata.
• Mass mmepụta mgbe ihu ọma nke n'omume.
Anyị nwere ndị injinia 10 na ụlọ ọrụ R&D anyị, ha niile bụ ndị dọkịta ma ọ bụ ndị prọfesọ si Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke China. Anyị nwere ike na-enye ndị kasị ọkachamara anwụ mgbatị ebu imewe ọrụ.
Gịnị Bụ Nkedo Ọrụ & Otu Ọnwụ Na-arụ Ọrụ
Die mgbatị a na-akpọ mgbatị mgbatị. Ọ bụ usoro nkedo nke a na-agbanye mmiri mmiri a wụrụ awụ n'ime ụlọ obibi akwụkwọ, a na-ejupụta oghere nke nchara ígwè na nnukwu ọsọ, a na-eme ka mmiri alloy sie ike n'okpuru nrụgide iji mepụta nkedo. The isi e ji mara nke na-anwụ mgbatị na ọdịiche ya na ndị ọzọ mgbatị ụzọ na-elu nsogbu na elu na-agba.
Metal Igwe a wụrụ awụ na-ejupụta oghere dị na nrụgide, ma na-eti mkpu ma na-eme ka ọ sie ike n'okpuru nrụgide dị elu, nrụgide nkịtị bụ 15-100MPa.
Metal Igwe a wụrụ awụ na-ejupụta oghere dị na nnukwu ọsọ, na-abụkarị mita 10-50 kwa nke abụọ, ụfọdụ nwere ike ịgafe mita 80 kwa sekọnd (ọsọ ọsọ nke oghere site n'ọnụ ụzọ dị n'ime-ọnụ ụzọ ámá dị n'ime), yabụ Oge njuju ahụ dị oke mkpụmkpụ, oghere ahụ nwere ike jupụta n'ihe dịka 0.01-0.2 sekọnd (dabere na nkedo nkedo).
The uru nke anwụ mgbatị na-agụnye magburu onwe akụkụ ziri ezi nke oge ọgbụgba. Abụkarị nke a dabere na ihe nkedo. Uru a na-ahụkarị bụ 0.1 mm maka nha mbụ nke 2.5 cm, na 0.002 mm maka nke ọ bụla ọzọ cm. Tụnyere ndị ọzọ mgbatị Filiks, ya nkedo elu bụ ezigbo, na fillet okirikiri bụ banyere 1-2.5 microns. E jiri ya tụnyere igbe nkedo ma ọ bụ usoro nkedo na-adịgide adịgide, enwere ike ịmepụta ihe nkedo nwere mgbidi nke ihe dịka 0.75 mm. O nwere ike itinye ihe owuwu n'ime ya ozugbo, dịka aka uwe waya, ihe ọkụ ọkụ, na ebe dị elu na-ebu ike. Uru ndị ọzọ gụnyere ikike ya iji belata ma ọ bụ zere mkpokọta nke abụọ, ọsọ ọsọ ọsọ, ịgbatị ike mgbatị ruo 415 MPa, na nnukwu mgbatị igwe.
Die casting Materials - Materials Ji Die Nkedo
Ọla eji eme ihe nkedo na-agụnye zinc, ọla kọpa, aluminom, magnesium, lead, tin, na alloys. Ọ bụ ezie na iron-cast iron dị obere, ọ ga-ekwe omume. Ngwongwo ndị ọzọ na-anwụ anwụ gụnyere ZAMAK, aluminom-zinc alloys na ụkpụrụ nke American Aluminium Association: AA380, AA384, AA386, AA390 na AZ91D magnesium. Njirimara nke ọla dị iche iche bụ ndị a:
• Zinc: Ngwongwo kachasị mfe ịnwụ-nkedo, ọ bụ akụ na ụba iji rụpụta obere akụkụ, dị mfe mkpuchi, ike mkpakọ dị elu, nnukwu plasticity, na ndụ nkedo ogologo.
• Aluminom: Mpempe akwụkwọ dị nfe, ihe nrụpụta siri ike na ihe nkedo dị warara nwere nkwụsi ike dị elu, nguzogide nrụrụ siri ike, ezigbo ihe eji arụ ọrụ, nrụpụta ọkụ na ọkụ eletrik dị elu, yana nnukwu ike na nnukwu okpomọkụ.
• Magnesium: Ọ dị mfe ịkpụzi ya, oke ike-ibu dị arọ, nke kachasị ọkụ n'etiti ọla ndị a na-ejikarị eme ihe.
• Ọla kọpa: High ekweghị ekwe, ike corrosion eguzogide, ndị kasị mma n'ibu Njirimara nke ọtụtụ ndị na-eji na-anwụ-mgbatị ọla, eyi-eguzogide, na ike nso ígwè.
• Nduzi na gbamgbam: oke njupụta, oke ogo dị elu, enwere ike iji ya dịka akụkụ mgbochi pụrụ iche. Maka nlekọta ahụike ọha na eze, alloy a enweghị ike iji ya dị ka ihe oriri na nchekwa. A na-eji alloy nke lead, tin na antimony (mgbe ụfọdụ nwere ntakịrị ọla kọpa) mee ụdị akwụkwọ na ọla nchara na akwụkwọ ozi.
Mkpokọta oke oke maka nkedo ịnwụ anwụ site na iji aluminom, ọla kọpa, magnesium na zinc bụ 70 lb (32 n'arọ), 10 lb (4.5 n'arọ), 44 lb (20 n'arọ) na 75 lb (34 n'arọ) n'otu n'otu.
Ọrụ Nkedo Ndị ọzọ Dị
Die mgbatị bụ nanị otu n'ime ọtụtụ mgbatị Filiks. Dika ulo oru mmeputa ihe ndi ozo, OuZhan nwekwara otutu uzo ihe omuma ndi ozo. Anyị nwere ike inye ndị ahịa ọ bụla ọrụ mgbatị ndị ọzọ:
1.Sand ebu nkedo usoro
Iji ájá dị ka ebu ihe, ájá nwere ihe dị iche iche nwere ike kewaa n'ime nkedo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eme ka ájá kpụọ ájá, wdg, mana ọ bụghị ájá niile nwere ike iji mee ihe. Ihe dị na ya bụ na ọnụahịa ahụ dị ntakịrị n'ihi na a na-ejigharị ájá e ji mee ihe na ebu; ọghọm bụ na mmepụta nke ebu na-ewe oge, ebu n’onwe ya enweghị ike iji ya ọzọ, na ngwaahịa agwụla naanị enwere ike nweta mgbe ebibisịrị ya.
2. Metal ebu nkedo usoro
Jiri igwe nwere ebe agbaze dị elu karịa akụrụngwa iji mee akpụzi. N'etiti ha na-ekewa n'ime ndọda mgbatị usoro, ala nsogbu mgbatị usoro na elu nsogbu mgbatị usoro. Dabere na agbaze agba nke ebu, metal nke enwere ike ịtụ bụ na-ejedebe.Ọkpụkpụ nkụ bụ nke usoro mgbatị ígwè.
3. waxzọ waks furu efu
Usoro a nwere ike ịbụ usoro ịkpụ ihe nkiri na mpụga usoro nkedo siri ike. Usoro a nwere ezi nkenke ma enwere ike iji ya rụọ nnukwu agbaze ọla (dịka titanium). Agbanyeghị, n'ihi ọnụahịa dị elu nke seramiiki, yana mkpa maka ọtụtụ kpo oku na nrụpụta mgbagwoju anya, ọnụ ahịa ahụ dị oke ọnụ.
Ngwa nke Ọrụ Nkedo Die na Akụkụ
Ouzhan Die Nkedo Elu Emechara